FITAZOMANA NY KISOA AMPIAKARINA TOY NY BIBY - ALIKA
Fitazomana ny kisoa ampiakarina toy ny biby
'Ity i Petunia, ilay kisoa volom-borona mavokely efa 8 volana. Skateboards izy, mitendry piano, mipetraka, mandry, onja ary mitsambikina amin'ny hoop. Mandeha amin'ny tadiny izy, matory miaraka amin'ny saka ary tena mamy. '
Ny santionany voalohany nentina tany Etazonia tamin'ny taona 1980 dia mainty. Misy karazany maromaro izao, toy ny volondavenona, fotsy, mena ary mena. Ny fitsidihana (na ny 'pinto') dia toa fiovana tian'ny tompona maro.
Kisoa madinidinika poti dia kisoa kely mety amin'ny fiainana an-trano raha voaofana tsara. Ny halavany dia 13-20 santimetatra ny halavany ary mety mitombo hatramin'ny 200 lbs. Izy ireo dia biby liana amin'ny toetrany mahatsikaiky ary faharanitan-tsaina faharoa amin'ny alika ihany. Tsy mpihinan-kanina izy ireo ary azo zarina amin'ny trano.
Ny kisoa misy savony dia lasa biby lamaody any Etazonia tamin'ny fiandohan'ny taona 1980 hatramin'ny tapaky ny taona 1990. Mampalahelo fa tsy maro ny tompony no nahazo fanabeazana sahaza momba ny fikolokoloana sy ny fikojakojana kisoa misy kibony ary maro no nilaozana tao amin'ny “toeram-pialofana henan-kisoa” sy fikambanana “mpamonjy kisoa” vao niforona. Hatramin'io fotoana io dia be ny fampahalalana navoaka ary natsangana ny fikambanana hanomezana loharanon-karena sahaza ny tompona maniry hitandrina ny biby fiompiny ho avy sy ho voatazona.
Tsy mitovy ny toetran'ny kisoa misy kibonao ao anaty ala. Ny lehilahy dia mazoto masiaka kokoa ary 'mitarika volo' rehefa mihamatotra, indrindra raha tsy voaroaka. Ny vehivavy dia mety ho lasa faritany rehefa bevohoka. Ny ankamaroan'ny kisoa dia handalo taona 'zatovo' rehefa mihamatotra. Ity dingana ity dia rehefa manandrana ny fari-tanin'izy ireo izy ireo ary mahita hoe aiza no hametrahany ANAO amin'ny filaharany. Anjaran'ny tompony ny miantoka ny fahafantaran'ny kisoa ny toerana sahaza azy ao amin'ny 'omby'. Ny tompony dia tokony hanao ny kisoa 'hahazo' ny sakafony sy ny fitsaboana azy, amin'izay dia manamafy ny zava-misy fa ny tompony no 'alpha.' Mandritra io dingana io, ny kisoa dia mety hiteraka fihainoana 'mifantina' ary tsy hiraharaha ireo baiko avy amin'ny tompony. Anjaran'ny tompony ny mampihatra tsy tapaka ny fomba fiasa amin'ny kisoa. Raha avela tsy voahitsy ny kisoa dia mety hanjary tsy voafehy ary izany dia indrisy, ny fotoana ilaozan'ny ankamaroan'ny kisoa any amin'ny fialofana sy famonjena. Tsy lesoka kisoa izany fa ny tsy fahampian'ny fanabeazana amin'ny tompony. Azafady mba alao antoka fa vonona ianao amin'ny andraikitry ny fananana biby alohan'ny hividiananao ny biby fiompinao. Miankina aminao ny ainy.
Ny kisoa matotra dia sahabo ho 13-20 santimetatra ny halavany, ary ny lanjany eo ho eo dia 130-150 pounds, nefa mety ho 90-175 ny habeny. Ny fihinanan-kanina / fisotroana tafahoatra dia mety hitarika amin'ny hatavezina amin'ny kisoao, ka miteraka lanjany maherin'ny 200 pounds.
Tsy misy ny antsoina hoe 'kisoa kely indrindra' na 'kisoa dite-dite.' Ireo biby ireo dia miteraka fototarazo mba hampihenana ny habeny. Ataovy ny fikarohana ataonao momba ny mpiompy alohan'ny fividianana olona milaza fa manao «miniature», sns... Azo inoana fa mpiompy tsy azo iadian-kevitra miaraka am-kisoa ireo izay mety hampiseho ny tsy fahatomombanana sy ny kilemaina rehefa mihantitra izy ireo, mitarika fanaintainana tsy mahasalama. biby fiompy
Ny any ivelany dia manome ny kisoa anananao hahay hiasa angovo fanampiny izay tsy ho vitan'izy ireo atao ao anaty trano. Raha tavela ao an-trano izy ireo ary tsy misy fivoahan'ny angovo mihintsy, dia ho hitan'ny tompony fa mora sosotra sy manimba ilay kisoa. Ny kisoa misy poti-potsy dia tsy ho faly miaina amin'ny toerana voafetra (izany hoe trano, condo kely, sns.). Ny kisoa misy kibony dia hankasitraka ny 'akanim-borona' karazana hiantsoana azy ireo. Omeo fandriana bodofotsy malefaka izy ireo na koa fandriana alika lehibe. Izany no hialokalofan'izy ireo ary hahita fampiononana izy ireo rehefa tratry ny fihenjanana. Raha tsy manome akanim-borona mifanaraka amin'ny tiany ianao, dia mety hahita fa ny biby fiompinao dia hanimba ny sasany amin'ny fanaka ao an-tranonao mba hanomezana akany bebe kokoa araka ny itiavany azy. Fitaovana hafa mety tian'ny biby fiompinao ao am-pandriany ny takelaka karatra voatetika, lamba firakotra efa simba na hazo fisolo.
pyrenees mahafinaritra sary alika
Raha fako efa nozarina ny kisoa misy kibonao dia mila manadio ny lapoaly arak'izay ilaina ianao. Miankina amin'ny habe sy ny taonan'ny biby fiompinao ny matetika.
Ny PBP sasany dia aleony manana fandriana vita amin'ny taolana hazo na baoritra efa simba na lamba firakotra taloha. Ataovy azo antoka fa hitandro ny fahadiovana ireo faritra ireo ary hanary fandriana taloha raha ilaina izany. Raha tsy voafehy ireo faritra ireo dia mety hiteraka aretina mikraoba, sns.
Mety hankafy mandro ny biby fiompinao. Etsy ankilany, mety tsy hanao izany izy. Diniho ny palitaon'ny biby fiompinao raha misy famantarana ny aretina na ny ratra. Diniho ihany koa ny tapakila. Azo inoana fa tsy hahazo parasy ny kisoao, fa ny kika kosa dia mety miteraka aretina amin'ny biby. Anontanio ny dokoteranao momba ny famantarana sy ny soritr'aretin'ny aretina vokatry ny kaikitry ny kongona.
Ianareo hoho kisoa dia mila haingo isaky ny 1-2 taona arakaraka ny habetsaky ny fampihetseham-batana azony. Ny kisoa mandeha an-tongotra tsy tapaka dia hanana hoza izay tsy mila fiheverana firy noho ny kisoa mipetrapetraka. Ary koa, ny kisoa mipetrapetraka dia kisoa FAT ary tsy mahasalama ny kisoao. Fahano sakafo ara-dalàna izy, ao anatin'izany ny fihoaram-pefy, voankazo ary legioma.
Ny kisoao dia mety manana tady izay mila fikojakojana (hokapaina) isan-taona na roa. Izany dia azo alamina amin'ny fotoana iray anaovanao ny volon-kisoao, satria ireo fomba roa ireo matetika dia mitaky fahaizana manokana amin'ny mpitsabo biby. Ny kisoao, miankina amin'ny toetrany, METY mamela anao hanapaka ny kitrony. Andramo fotsiny ity raha fantatrao izay ataonao. Mety hanimba ny tongotry ny biby fiompinao ianao ary hiteraka aretina.
Mandritra ny fitsaboan-biby dia mila manavao ny kisoa amin'ny vaksiny ianao. Miovaova arakaraka ny toerana misy ny vaksiny sasany. Miresaha amin'ny dokotera momba ny vaksiny manokana ilaina amin'ny faritra misy anao.
Ianao kisoa koa dia mila ho kankana. Manontania mpitsabo anao raha mila fanafody tsara indrindra ianao.
Ny kisoa dia misy volom-bolo fa tsy volo. Ity dia karazana volo marokoroko izay manarona kely ny vatany. Handroaka an'io volo io isan-taona izy ireo. Misy ny milaza fa raha manitsaka volom-boan-kisoa ianao dia ho fantatrao tsara! Satria kely ny volon'izy ireo, ny kisoa maivana dia mora zakaina sunburn ary mila fiarovana toy ny mason'ny masoandro.
Amin'ny volana fahavaratra rehefa miakatra ny mari-pana dia omeo alokaloka sy toerana hangatsiaka ny kisoao. Hankasitraka ny dobo kiddie misy rano ampy izy ireo hampangatsiatsiaka ny tenany satria tsy manana fihary hatsembohana mifehy ny hafanan'ny vatana.
Ny fidorohana dia olana goavana amin'ny kisoa misy vilany. Hamarino tsara fa mikaroka ny mpiompinao alohan'ny hanaovana fividianana ary hahafantatra izay tadiavinao mifanaraka amin'ny biby. Ny fiompiana / fiompiana hazo fijaliana dia mety hiteraka kilema maro toa ny fiovana amin'ny sinus mety hahatonga ny kisoa ho faty sempotra noho ny tsy fahafahany miaina tsara. Ny olana iray hafa mifandraika amin'ny fiompiana tsy mety dia ny tsy fisian'ny fanokafana anal. Izany dia mahatonga ny kisoa tsy afaka manafoana ny fako ary ny biby dia ho faty amin'ny fahafatesany miadana miadana. Ny fiovana eo amin'ny tongotra sy ny tongotra dia mety hitranga. Jereo ny fividianana mety hitranga amin'ny fahasarotana amin'ny fivezivezena. Ny fiovana sasany (toy ny olana iraisana / socket na tongotra fohy) dia mety tsy hiseho mandra-pahatongan'ny fiainanao any aoriana. Ireo olana iraisana ireo dia mety hiteraka fikorontanana vanin-taolana .
Izany dia mitarika anay amin'ny fanodinkodinana / famoahana ny biby fiompinao. Na dia maro aza ny mpiompy no manery ny hanan-kisoa am-bifotsy am-bifotsy am-bidy, dia andraikitry ny tompony ny mamoaka na mamaha ny biby fiompin'izy ireo. Angamba ny antony tsara indrindra hampandehanana ny vavy mandritra ny fahatanorany dia mba hahazoana tombontsoa ara-pahasalamana. Mihena ny antony mampidi-doza ary koa ny fihenjanana raha mihintsana ny zana-bolamenanao vavy alohan'ny faha-6 taonany. Rehefa esorina ny tranon-jaza sy ny fihary atodinaina roa, dia nesorinao ny mety hisian'ny tsingerin'ny hafanan'ny hafanan'ny kisoao, izay miseho isaky ny 21 andro. Ny biby fiompinao dia tsy hitady ny kisoa akaiky indrindra intsony, sy ny aretina mety hitranga, kansera , ary ireo olana hafa misy amin'ny taovam-pananahana dia esorina.
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny zana-kisoa lahy rehetra antenaina ho biby dia tokony halefa alohan'ny hitondrana azy mody. Ny sambo dia manana fahaizana miteraka fako raha vao 8 herinandro! Tena 'be fitiavana' izy ireo ary sarotra tazomina toy ny biby fiompy raha tsy voaroaka. Ireo lehilahy tsy mandeha amin'ny laoniny, antsoina hoe barrows, dia hanana fiainana tsy misy homamiadana, aretina, ary olana hafa misy amin'ny taovam-pananahana.
Ny kisoa misy kibo ao anaty ala dia… kisoa. Hihinana na inona na inona izy ireo. Manimba ny fahasalaman'izy ireo izany. Ny tompon-trano dia tokony hampianarina amin'ny sakafo mahavelona sy ny sakafon-kisoa misy kibony. Raha mihinan-kanina be loatra, na manome sakafo tsy ara-dalàna, dia ho matavy loatra izy ireo. Mety hitarika hialokaloka amin'ny olana ara-pahasalamana ho an'ny biby fiompinao izany. Faly ny kisoa 'miorim-paka' ho an'ny sakafo. Avelao ho any ivelany ny biby fiompinao ary hikotrika ny loto. Ny tokotaninao dia haka tolotra be avy amin'ny kisoa. Ataovy ao an-tsaina izany alohan'ny ividiananao ny biby fiompinao. Aleon'ny biby fiompinao hihinana zava-maniry sy bibikely. Ny biby fiompy ao an-trano dia azo omena sakafo manokana ny henan-kisoa izay sakafo noforonina manokana izay manome otrikaina sy famenony tena ilaina ilain'ny biby fiompinao ho salama tsara. Amin'ny famahanana ny sakafon'ny kisoao dia ho tianao ihany koa ny mametra ny kaloria. Izany dia hitazona ny biby fiompinao tsy ho be loatra sy sarotra tantana. Ny biby fiompinao dia mety homena fitsaboana mahasalama toy ny voankazo sy sombin-tsakafo sasany, ho valisoa, nefa tsy tokony ho fihoarana.
Ataovy ao an-tsaina fa misy zavamaniry marobe manapoizina ny kisoa ao anaty vilany. Manaova fikarohana mba hijerena izay zavamaniry tompon-tany mety hanimba ny biby fiompinao. Zavamaniry maro an-trano koa mety hampidi-doza amin'ny biby fiompinao. Tehirizo amin'ny toerana avo ny zavamaniry ao an-trano mba tsy ho azon'ny biby fiompinao.
Ny kisoa misy kibo-potsy dia biby andiany ary mamaly tsara ny fiainana ivelan'ny trano izay omena toerana malalaka hongotana sy hitrandrahana. Izany dia manome azy ireo ny fahaizana mamatsy otrikaina ilain'ny vatany. Ny kisoa misy kibony dia azo zarina mandeha amin'ny tadiny ary handray soa be dia be amin'ny fampihetseham-batana ho azony amin'ny fitsangatsanganana mahazatra. (Ny fandehanana amin'ny beton na ny arabe dia manampy amin'ny famolavolana ny hoho nefa tsy misy fitsidihana lafo ny mpitsabo biby.) Alao antoka fa manana toerana sahaza ny kisoa andehanan'izy ireo sy faka. Rehefa mihalehibe ny kisoao dia hitombo koa ny filany efitrano malalaka. Hamarino tsara fa afaka manome an'ity tombontsoa ity amin'ny fahasalamany ianao alohan'ny hividiananao biby.
Ny biby fiompinao dia hahatratra ny habeny manodidina ny 3-4 taona ary hanana androm-piainana 10 ka hatramin'ny 15 taona arakaraka ny fahazotoanao amin'ny fikolokoloana ara-pahasalamana.
Ny kisoa misy kibony dia biby fahaefatra marani-tsaina indrindra, ary azo ampiofanina toy ny 'mipetraka' sy 'mandry', ary mety ho zatra fiofana na fako an-trano. Aza adino fa io faharanitan-tsaina io dia mety hivily hanohitra anao. Ny PBP dia mety ho lasa manan-talenta amin'ny fanokafana varavarana (mivoaka any ivelany, vata fampangatsiahana, vata famonoana simika, sns.).
Mifanohitra amin'ny fomba fiteny taloha hoe 'fofona tahaka ny kisoa ianao', ny kisoa misy kibony dia tsy misy fofona.
Kisoa - kisoa lahy
Mamafaza - kisoa vavy
Gilt - kisoa vavy tanora izay tsy mbola nandefa fako
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana miaraka aminy Aussie SY saka NAMANA
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana eo izay misy volom-borona amin'ny tendany
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana manana elatra
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana miaraka amin'ny voninkazo
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana miaraka amin'ny saka saka
Nitafy i Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana nitafy voatavo
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana miaraka aminy saka namana, samy mitafy voatavo
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana eo amin'ny skateboard
alika kely husky siberianina rehetra
Petunia ilay kisoa mena-bakolosy mavokely, 8 volana miaraka aminy Sinoa voadona NAMANA
Kisoa kibo poti
basset hound alemanina mpiandry ondry mifangaro
mixer pointer fohy volo alemana
sarinà huskies fotsy misy maso manga
ny alika mpiady ao cordoba
laboratoara mainty sy fotsy mifangaro alika kely
akc alika miteraka sary
lhasa apso poodle afangaro alika kely